Weerarradii ay ku guulaysanaysay burcad-badeedda oo ku yaraaday Badweynta Hindiya - Sabahionline.com
Weerarradii ay ku guulaysanaysay burcad-badeedda oo ku yaraaday Badweynta Hindiya Abriil 22, 2012
Weerarrada burcad-badeeddu ay ku gulaysatay ayaa ku sii yaraanayey Badweynta Hindiya rubucii hore ee sanadkan 2012, waxaanay ka sii yaraanayeen sidii ay ahaayeen waqtigan oo kale sanadkii hore, sida lagu qoray warbixin ay soo saareen Ciidamada Badda ee Midowga Yurub ee Soomaaliya (EU NAVFOR). Qodobbo la xiriira
Warbixinta ayaa tirisay 27 weerar oo ay burcad-badeeddu qaadday intii u dhexaysay January iyo April, taa oo la barbar-dhigay 91 ay qaadday sannadkii hore. Guusha burcad-badeedda ayaa 14% hoos ugu dhacay rubucii ugu horreeyey sannadkii hore, marka la barbardhigo 27% oo uu ahaa xaddiga gulshooda waqtigan oo kale 2010-kii iyo 28% 2009-kii. Hoos u dhicidda hawlaha burcad-badeednimada ayaa waxaa u sabab ah korodhka ilaalo hubaysan oo saaran maraakiibta ganacsiga, joogidda ciidamo badda oo shisheeye oo jooga marin badeedka maraakiibta iyo shirkadaha maraakiibta rarta oo dareen fiican haatan u yeeshay maaraynta ugu waxqabad wanaagsan, sida uu qabo sarkaalka saxaafadda ee EU NAVFOR Timo M. Lange. Si loo bajiyo burcad-badeednimada iyo dhaca hubaysan, ayay EU NAVFOR waxay galbisay 150 markab oo WFP u rarraa iyo 126 markab oo u rarraa AMISOM. Weli, waxaa gacanta burcad-badeedka ku jira sagaal markab iyo 242 la hayste. Muxuu kula yahay qoraalkan?